Kubhabhatidzwa kunoreva (1) kushambidzwa (2) kuvigwa (kunyudzwa) iye pamweya zvinoreva (3) kuisa zvitadzo pamupiro nokuturika maoko, zvinova zvaiitwa muTesitamende yekare pamazuva ayo.
MuTesitamende yekare, kubhabhatidzwa kwaJesu naJohane mubhabhatidzi kwaiva kushambidza zvitadzo zvapasi rose. ‘Kubhabhatidzwa kwaJesu’ kunechirevo chokubvisa zvitadzo zvamarudzi ose, kubvisa zvitadzo zvapasi rose.
Jesu akabhabhatidzwa naJohane mubhabhatidzi mumiririri wemarudzi ose uye mushumiri mukuru wedzinza raAroni, akaisa matadzo epasi rose paari, ichi ndicho chaiva chinangwa chokubhabhatidzwa kwake.
Zvinoreva shoko rokuti kubhabhatidzwa pamweya, kupfuudzira, kuvigwa, naizvozvo, ‘kubhabhatidzwa kwaJesu.’ Zvinoreva kuti zvitadzo zvose zvakaiswa panaJesu uye akatongwa pachinzvimbo chedu. Nokuda kuponesa marudzi ose, Jesu akatora zvitadzo zvazvo zvose nekubhabhatidzwa kwake uye nokutifira.
Nokudaro, rufu rwake, rufu rwako iwe neni, vatadzi vose vepasi rino, uye kumutswa kwake, kumutswa kwevanhu vose. Mupiro wake ruponeso rwavatadzi vose, uye rubhabhatidzo rwake ndihwo uchapupu hwekushambidza zvitadzo zvemarudzi ose.
Bhaibheri rinotitaurira kuti, “Mvura iyoyi ndiyo yakanga ichifananidzira rubhabhatidzo runokuponesai zvino.” (1 Pita 3:21) kubhabhatidzwa kwaJesu ndiyo nzira yakarurama yokuponesa vanhu vose nokushambidza zvitadzo zvavo.